Ungayitshintsha njani imali kwikhadi leSberbank uye kwi-wi Qiwi nge-Intanethi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayitshintsha njani imali kwikhadi leSberbank uye kwi-wi Qiwi nge-Intanethi?
Ungasebenzisa iakhawunti yakho yobuqu kwiwebhusayithi yeSberbank, kufuneka ufumane iiTransfers kunye neentlawulo, faka iphasiwedi kunye nepine apho, ukuba awunayo, ungayiprinta kwi-ATM. Umamkeli ubonakalisa i-kiwi kwaye imali kufuneka ibe kwikhadi le-kiwi. Unganxibelelana nenkonzo yenkxaso yebhanki, kufuneka bachaze ngokweenkcukacha indlela yokwenza oku.
Fumana i-ID kunye neepassword zakho eSberbank Online, zifunyanwa kwi-ATM, yiya kwiakhawunti yakho eSberbank Online, fumana ipayee kwaye ufake iinombolo zeQIWI. Gcwalisa amasimi kwaye yiyo. Ukuba ikhadi lakho linikezela ilungelo lokuthenga kwi-Intanethi, ke uSberbank uya kukunceda ugqithisele imali kwi-kiwi.
Ikhadi leplastiki sele lazisiwe kubomi bethu bemihla ngemihla. Phantse wonke umntu unekhadi elinjalo. Basebenzisa ukudluliselwa kwemivuzo, ngala makhadi singayibuyisela imali eseleyo kwifowuni, ukuhlawula izindlu kunye neenkonzo zoluntu. Ukudluliselwa kwemali kunokwenziwa ngokukhawuleza nangokuxabisekileyo kula makhadi. Kwaye ukuhambisa imali kwiKhadi leSberbank uye kwi-wi Qiwi nge-Intanethi, zimbini iindlela: ngeSberbank Online, kwaye kukho inkonzo efana ne-quot; I-mobile bankquot ;. Le ndawo ichaza ngokucacileyo indlela yokwenza oku. Ngethamsanqa
Ukuba ufuna ukudlulisa imali isuka kwikhadi leSberbank uye kwi-qiwi wallet, oku kulula kakhulu:
1) Kufuneka uye kwiwebhusayithi yeSberbank kwaye ungene apho.
2) Ke kuya kufuneka ukhethe icandelo Udluliselo kunye neentlawulo
3) Apho ubhala isikhwama esifunayo, faka iinkcukacha kwaye udlulise.
Kwaye usenakho ukuhambisa imali usebenzisa inkonzo quot; I-Mobilequot ;. Kufuneka iqhagamshelwe kuwe kwaye kufuneka wenze itemplate yeselula ebonisa inkampani yeKiwi. Ukuhambisa, kufuneka uthumele umyalezo okhethekileyo kwinombolo emfutshane yaseSberbank: QIWI bhala inombolo ye-wallet kunye nenani lokudlulisela. Umzekelo: QIWI 9436780000 500 kwaye uthumele lo myalezo ku-900.
Kubonakala kum, ukuba uya kwiakhawunti yakho yobuqu kwiwebhusayithi ye-Savings Bank, unokufumana iqhosha lesicatshulwa; ukudluliselwa kwikhadibhodi; kwaye ufake idatha yekhadi le-kiwi. Ukuba awunayo ikhadi le-kiwi yeplastiki okwangoku, kwi-wallet yakho ye-kiwi, jonga okanye u-oda ukukuthumela iinkcukacha zekhadi lakho le-kiwi ebonakalayo ngeSMS Emva koko imali ethunyelwe ukusuka kwi-Sberbank kwi-intanethi kwikhadi le-kiwi nayo iya kuba kwi-wallet.
Ukudlulisela imali, ukwenza ugqithiso akukho nto inzima, okokuqala ixesha elininzi liya kuchitha kuyo, kwiwebhusayithi yebhanki kukho ukhetho "quot; Ukudluliselwa kwemali;; cofa, faka idatha, inombolo ye-wallet yakho kwaye ucofe u-quot;. Ugqithiselo luzakuthunyelwa.
Ungazama ngokusebenzisa iwebhusayithi ye-Kiwi (ngokugcwalisa)
Okanye ngenkonzo ye-Intanethi yeSberbank.
Zininzi iindlela zokwenza oku.
Ngokubanzi, zikhethele ukuba yeyiphi indlela eyamkelekileyo kuwe, kodwa xa iyonke, ezi ndlela zimbini zokuphinda wenze umsebenzi wesandla se-Kiwi !!
Indlela elula Dlulisa imali kwikhadi leSberbank uye kwi-wi Qiwi wallet nge-Intanethi -ukusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni yeSberbank Online (https://online.sberbank.ru).
Kuqala kufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo apho. Ukungena ngale ndlela, iya kwiakhawunti yakho. Emva koko, khetha u-quot; ugqithiselo kunye nokuhlawulwa ;.
Kweli candelo kufuneka ufumane kwaye ukhethe i-Qiwi wallet onomdla kuyo. Ukuba akukho lwazi malunga ne-nm phaya, kuya kufuneka uchaze inani le-wallet yakho ye-Qiwi, iinkcukacha zayo, emva koko wenze intlawulo.
Indlela echaziweyo yenye yezona zininzi, zilula (akukho mfuneko yokuya ndawo, zishicilele okuthile, njl njl) kwaye azifuni umzamo owongezelelweyo kunye nexesha.
Inkonzo enjalo njengokudluliselwa kwemali isuka kwikhadi iye kwi-wallets ze-elektroniki inikezelwa ziibhanki ezaziwayo.I-Sberbank nayo inenkonzo. Ukwenza oku, yiya kwiakhawunti yakho kwiwebhusayithi yebhanki .. Khetha i-quot; ukudlulisa kwikhadi ;. Emva koko, khetha i-qiwi wallet kwaye uqinisekise ugqithiso.
Akunzima ukwenza oku ukuba unayo iakhawunti yakho enxulumene neSberbank. Ukuba akukhange kubenjalo, kuxhume ngaphakathi. Yiya kwiakhawunti yakho. Khetha & quot; Udluliselo kunye neefayile zokuhlawula ;. Okulandelayo, bonisa i-payee Qiwi. Faka inombolo ye-wallet, isixa kwaye ugqithise imali.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,306.